यात्राको आनन्द लिनुहोस्, विश्वव्यापी चर्च अफ गड स्विजरल्याण्ड (WKG)
के तपाईसँग राम्रो यात्रा छ? यो सामान्यतया पहिलो प्रश्न हो जुन तपाईंलाई सोधिन्छ जब तपाईं विमानबाट बाहिर निस्कनुभयो। तपाइँ प्राय: कसरी जवाफ दिनुहुन्छ: «होईन, यो भय terrible्कर थियो। हवाइले ढिला हिड्यो, हामीले उथलपुथल उडान गरेका थियौं, खानेकुरा थिएन र अब मलाई टाउको दुखेको छ! " (ओहो, यो मेरो अधिक असहज उडानहरू मध्ये एक पछि मलाई भएको जस्तो लाग्छ!)
म एक दिन बाट अर्को यात्रा गर्न सम्पूर्ण दिन बर्बाद गर्न माफ गर्नुहोस्; यसैले म मेरो यात्रा समय केहि प्रयोग गर्न खोज्छु। म जहिले पनि मसँग धेरै पुस्तकहरू लिन्छु, जवाफ दिन चिठीहरू, लेखहरू सम्पादन गर्न, अडियो टेपहरू र पाठ्यक्रम केहि चकलेट खानाको रूपमा। यद्यपि सवारी गठ्ठा थियो वा म ढिलो आईपुग्यो भने पनि म भन्न सक्छु कि मैले यात्रालाई रमाईलो गरें किनकि म बस गलत प्रकारले घटेको वा क्रोधको साथ खाना पकाउने क्रममा बसिरहेको थिएन।
के जीवन कहिलेकाँही त्यस्तो हुँदैन? जीवन यात्रा हो; हामी यसबाट रमाइलो पनि गर्न सक्दछौं र परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका समयहरू प्रयोग गर्न सक्दछौं, वा हामी परिस्थितिहरूको साथ संघर्ष गर्न सक्दछौं र परिस्थिति फरक भएको हुन्थ्यो भन्ने चाहान्छौं।
कुनै प्रकारले हाम्रो जीवनमा यात्रा दिनहरू हुन्छन्। यस्तो देखिन्छ कि हामी एक ठाँउबाट अर्को ठाउँतिर दौडिरहेका छौं, मानिसहरूलाई भेट्न भेट्नु र भेट्नु भएको कुरालाई सूचीबाट हटाउन दगुर्दै। त्यस दिनको मानसिक स्नेपशट लिनको लागि हामी पछाडि फर्कौं र भनौं, यो मेरो जीवनको क्षण हो। धन्यवाद प्रभु, यो क्षणको लागि र यस जीवनको लागि "?
"हामी अहिलेको क्षणमा अझ बढी बाँच्नुपर्दछ," यान जोनसनले आफ्नो पुस्तक "भगवानको उपस्थितिबाट आनन्द उठाउँदै" भने (भगवानको उपस्थितिको आनन्द लिनुहोस्) "किनकि यसले हामीलाई जीवनको प्रक्रिया र नतीजा बुझ्न सहयोग गर्दछ"।
हाम्रो सूचीमा जीवन केवल चीजहरू घटाउनु मात्र हो। कहिलेकाँही हामी उत्पादक बन्न धेरै व्यस्त हुन्छौं र केवल सकेसम्म सन्तुष्ट महसुस गर्छौं जब हामी सकेसम्म धेरै काम गरी सकेका छौं। जबकि तपाईंको उपलब्धिहरूको आनन्द लिन राम्रो छ, तिनीहरू यति मीठो छन् यदि हामी "विगतमा सुस्त हुनु वा योजनाबिना भविष्यमा चिन्तन गर्नुको सट्टा यस वर्तमान क्षणको आनन्द लिन्छौं"। (आइबिड।) न केवल जीवनमा राम्रो चीजहरू राम्रो देखिन्छ जब हामी प्रत्येक क्षणको आनन्द लिन्छौं, तर खराब चीजहरू अधिक सहन योग्य हुन्छन् जब हामी तिनीहरूलाई सम्पूर्ण प्रक्रियाको अंशको रूपमा हेर्दछौं। परीक्षण र समस्या स्थायी हुँदैनन्, ती पथमा कुनै न कुनै ढु stones्गा जस्तै छन्। मलाई थाहा छ यो भन्न सजिलो छ। तर याद गर्नुहोस् कि तपाईंले पहिल्यै धेरै नराम्रा ठाउँहरू पार गरिसक्नुभयो र तपाईंको हालको तपाईंको छिट्टै हुनेछ। यसले यो सम्झन पनि मद्दत गर्दछ कि हामी यहाँ केवल यस उद्देश्यका लागि छैनौं। हामी अर्को, राम्रो ठाउँमा जाने बाटोमा छौं। फिलिप्पी 3,13: १ 14-१ मा पावलले हामीलाई प्रोत्साहन दिन्छन्:
«भाइहरू, म आफैंलाई यो लाग्यो कि यो लिएको छैन। तर एउटा कुरा [म गर्छु]: म पछाडिको कुरा बिर्सन्छु र अगाडि भएका कुराको लागि पुग्न खोज्छु र लक्ष्यको खोजी गर्दछु, येशू ख्रीष्टमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटको युद्ध मूल्य। "
हामीलाई दिमागमा लक्ष्य संग जारी गरौं। तर हामी यात्रा को हरेक दिन रमाईलो पनि गर्छौं। राम्रो यात्रा गर्नुहोस्!